Afreximbank’s $1.5b Facility for Zimbabwe —
The African Export-Import Bank (Afreximbank) will arrange between $1 billion and $1.5 billion of funded and guarantee facilities to support businesses interested in investing in Zimbabwe, its President, has announced.
Speaking during a special session on “Doing Business in Zimbabwe” at the Africa CEO Forum in Abidjan, Dr. Oramah said the facilities would be arranged under ZimOpen, an inward investment support facility, which Afrexim-bank was putting in place in collaboration with the government of Zimbabwe.
Oramah told the session, chaired by President Emmerson Mnanga-gwa of Zimbabwe, that ZimOpen was aimed at de-risking eligible inward investment into Zimbabwe, catalysing trade finance inflows and increasing the availability of U.S. dollar liquidity in order to assure investors of more predictability in exit possibilities and terms.
The President said Afrexim Bank came with strong credentials on Zimbabwe, noting that over the past 20 years, the bank had disbursed more than $7 billion to Zimbabwean entities in the public and private sectors without suffering any credit losses.
Earlier, President Mnangagwa made a presentation on Zimbabwe’s social and economic development agenda and discussed initiatives the government was taking to promote investments.
Be the first to comment on "Afreximbank’s $1.5b Facility for Zimbabwe"
Bitcoin: Hackers’ ‘Anonymous’ Currency The perpetrators of the global cyberattack that caused havoc in 150 countries demanded “ransom” money in bitcoins, but experts believe the…